Iimpawu ze-Americium Element Facts
I-Americium iyinxalenye ye-metallic element ene- atomic inombolo 95 kunye nesimboli sezinto . Yona kuphela into edibeneyo ebomini bemihla ngemihla, ngobuncinane bemininzi yokufunyanwa kwentambo ye-ionization . Nantsi iqoqo lezinto ezinomdla kunye neenkcukacha ezithandayo.
I-Americium yaqala ukuhlanganiswa kwaye yachongwa ngo-1944 nguGlenn T. Seaborg, uRalph James, uLor Morgan, no-Albert Ghiorso kwiYunivesithi yaseCalifornia, eBerkeley njengenxalenye yeManhattan Project. Isakhi saveliswa usebenzisa i-cyclotron engama-intshi engama-60, nangona mhlawumbi iimvavanyo zaze zavelisa into. Nangona i-element 95 yafunyanwa ngokuyilungisa, i-americium ivela ngokwemvelo njengento elandelwayo kwimaminerali ene-uranium. Kwixesha elidlulileyo, loo nto yenzeke ngokwemvelo kwiimpendulo zenyukliya njengoko kutshanje nje kwiminyaka eyi-bhiliyoni edlulileyo. Konke oku ku-americium sele ipholile kwi-isotops yentombi .
Igama legama le-americium leMelika. I-Americium ilapha ngaphantsi kwe-lanthanide element europium, ebizwa ngokuba yiYurophu.
I-Americium yintsimbi eshenxisayo ye-metalactive metal. Zonke i-isotopes zale nxalenye zichanekile. I-isotope kunye nesigamu-sithuba eside kunabo bonke i-americium-243, ene-half half life of 7370. Ii-isotop eziqhelekileyo ziyi-americium-241, kunye nobomi besiqingatha kweminyaka engama-432.7, kunye ne-americium-243. I-Americium-242 yaziwa kwakhona, kunye nobomi bemizuzu engama-141. Ingqungquthela, i-isotopi ezingama-19 kunye ne-8 iisomsikliya zenyukisiwe. Ama-isotopes ahluke ngokungafani ne- alpha , beta, kunye ne-gamma yokubola.
Ukusetyenziswa okuphambili kwe-americium kumatshini okujonga umsi kunye nophando lwezenzululwazi. Kwenzeka ukuba inxalenye yomsakazo ingasetyenziselwa iibhetri zendawo. I-Americium-241 ecinezelwe yi-beryllium yindawo efanelekileyo ye-neutron. Njengamanzi amaninzi anomswakatho, i-americium iluncedo ekuveliseni ezinye izinto. I-Element 95 kunye nezixhobo zayo zixhobo eziphathekayo eziphathekayo ze-alpha kunye ne-gamma.
Izityalo zamandla enyukliya zivelisa i-americium njengenxalenye yokubola ngokulandelelana kwi-bombardment ye-neutron ye-plutonium. Iigramu ezimbalwa zequmrhu ziveliswa ngokusebenzisa le ndlela ngonyaka.
Iimpawu zenyama kunye neekhemikhali ze-americium zifana nezo ze-plutonium (isalathisi ukuya kwesobunxele kwitheyibhile lexesha) kunye ne- europium (into ephezulu ngaphezulu kwitheyibhile yexesha). U-americium omtsha uyisityambo esimhlophe esiliva esiliva, kodwa ngokukhawuleza kuphazamisa emoyeni. Isinyithi sisithambile kwaye senzeke ngokulula nge-modus esezantsi ngaphantsi kwe -actinides ezandulelayo kwitheyibhile. Ingqungquthela yayo iphakame ngaphezu kwe-plutonium ne-europium, kodwa iphantsi kweleyo ye-curium. I-Americium ingaphantsi kune-plutonium, kodwa ininzi kakhulu kune-europium.
I-Americium i-paramagnetic kwi-wide range of temperatures, ukusuka kwiqondo lokushisa elibandayo ukuya phezulu kweqondo lokushisa.
Iimeko eziqhelekileyo ze- oxidation yelungu lama-95 yi-+3, kodwa inokuluhlula ukusuka kuphi +2 ukuya ku-8. Uluhlu lwe-oxidation luchaza lukhulu kunanoma yimuphi umbandela we-actinide. Ion i-colored in a solutionous solution. Umbuso +3 awunambala ophuzi obomvu, +4 urhulumente obomvu obomvu, onemibala emdaka kunye eluhlaza kwamanye amazwe. Isimo ngasinye se-oxidation sinomlinganiselo ohlukeneyo wokutyunjwa.
Ukwakhiwa kwe-crystal ye-americium kuxhomekeke kubushushu kunye noxinzelelo. Kwiimeko eziqhelekileyo, isinyithi sibonakala kwifom yesalathisi esomeleleyo enokulinganisa kwe-crystal ye-hexagonal. Xa isinyithi sixinyiweyo, itshintsha kwifom ye-beta, eline-cubic symmetry ephakathi. Ukwandisa ingcinezelo ngaphezulu (23 GPa) iguqula i-americium kwifomu layo le-gamma, eliyi-orthorhombic. Isigaba se-crystal monoclinic siye saqatshelwa, kodwa akucaci ukuba ziphi na iimeko ezibangele. Njengamanye ama-actinides, i-americium ukuzilimaza kwayo i-crystal lattice esuka ekuhleni kwe-alpha. Oku kubonakala ngakumbi kwiqondo eliphantsi.
Isinyithi siyancibilika kwi-acids kwaye siyasabela nge-oxygen.
I-Americium ingasetyenziselwa kunye ne-phosphorescent zinc sulfide ukwenza i-spinthariscope eyenziwe yinto eyenzayo, into efana nomtshini we-radiation ohamba phambili kwi-counter Geiger. Ukubola kwe-radioactive americium kunika amandla kwi-phosphor, kubangela ukuba kukhanyiswe.
Akukho nxaxheba eyaziwayo ye-biological of americium kwizinto eziphilayo. Ngokuqhelekileyo kuthathwa njengetyhefu ngenxa ye-radioactivity yayo.
I-Americium Atomic Data
Igama le-Element : i-Americium
I-Symbol Symbol : Am
Inomic Number : 95
Ubunzima be-Atom : (243)
Iqela leQela : i-f-block element, actinide (uchungechunge lwe-transuranic)
Ixesha lexesha : i-7
Uqwalaselo lwe-Electron : [Rn] 5f 7 7s 2 (2, 8, 18, 32, 25, 8, 2)
Imbonakalo : Isisitye se-metallic esomeleleyo.
I-Melting Point : 1449 K (1176 ° C, 2149 ° F)
Indawo yokubilisa : 2880 K (2607 ° C, 4725 ° F) iqikelelwe
Ubuninzi : 12 g / cm 3
I-Atomic Radius : 2.44 iAnstroms
Amazwe okuxhoma : 6, 5, 4, 3
Aluminium okanye iAluminium Facts
Imithetho Yemizobo yePatent
Inkqubo yokuHlala kweNkcubeko yeKoppen
'I-OE' ivakaliswe njani ngesiFrentshi?
Ukuhlaziywa kwePiano yeDiari: Yamaha P85